Tonizia: Fankalazana ny Faha-10 taona Nahafatesan’i Bourguiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2018 3:26 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, عربي, English
Nahatsiaro ny tsingerintaona faha-10 nahafatesan'ny filoham-pireneny voalohany – Habib Bourguiba ny Toniziana. Mpisolovava Toniziana, mpitondra fanjakana ary mpanorina ny Repoblika Toniziana izy, izay nitondra ny firenena nanomboka ny 25 Jolay 1957 hatramin'ny 7 Novambra 1987.
Taorian'ny fanambarana ny Repoblika Toniziana tamin'ny 25 Jolay 1957, nampiditra lalàna maro mifandraika amin'ny fanabeazana, ny zon'ny vehivavy sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana i Bourguiba, anisan'ireo vitsivitsy izay nandray anjara lehibe tamin'ny famoronana fiovàna eo anivon'ny fiarahamonina Toniziana. Mbola nitoetra ho filoham-pirenena hatrany i Bourguiba hatramin'ny 7 Novambra 1987 raha nanala azy ny praiminisitra, noho ny fahanterany sy ny olany ara-pahasalamana. Nodimandry tamin'ny 6 aprily 2000 i Bourguiba, ary nahatsiaro izany tsingerin-taona izany ny mpisera aterineto Toniziana.
Tao amin'ny Facebook, natsangana ny hetsika ahitana mpandray anjara 10.425 ary namoaka lahatsoratra maromaro ireo bilaogera tamin'io fotoana io.
Illusions nanamarika hoe:
Androany, 6 Aprily, dia manamarika ny faha-10 taonan'ny fahafatesan'ny olona iray izay nanamarika ny tantaran'i Tonizia sy ny izao tontolo izao. Olona iray, izay tahaka ny olona rehetra, dia nanao fahadisoana saingy kosa nanana ny lanjany lehibe teo amin'ny fivoaran'ny firenena izay tiako indrindra, nanomboka tamin'ny andraikiny tao amin'ny Hetsika Nasionaly, ary avy eo ny fametrahana ny fototry ny firenena mahaleo tena.
Arabasta niresaka momba ny fiantraikan'ny hevitra sy ny zava-bitan'i Bourguiba. Raha ny marina dia niresaka momba ny foto-pampianarana nampitondrany ny lohateny hoe “Bourguibisme” izy:
Raha miresaka momba ny Bourguibisme aho, dia voalohany indrindra satria mino aho fa nanao izay azo faritana fa “foto-pampianarana” na fomba fisaina i Bourguiba (na dia teo aza ny fahadisoana marobe). Raha ny marina, tsy afaka hilaza toy izany ho an'ireo mpitarika amin'izao tontolo izao isika.
Miombon-kevitra ny ankamaroan'ny Toniziana fa nanao fahadisoana i Habib Bourguiba, saingy manaiky ihany koa izy fa lehilahy mahafinaritra namela marika amin'ny tantaran'i Tonizia izy.